gideon gono on News24
ARTICLES RELATING TO GIDEON GONO
Zimbabwe's main opposition, the MDC led by Morgan Tsvangirai, has called on the country's central bank governor John Mangudya to step down after his alleged failure "to address the current cash crunch".
Zimbabwean President Robert Mugabe’s closest ally in the ruling Zanu-PF party has reportedly indicated the 90-year-old will not retire any time soon, declaring the veteran leader "is here to stay".
The election victory of Zimbabwean President Robert Mugabe appears to have unsettled foreign investors who are selling off listed stocks.
President Robert Mugabe's apparent landslide election has prompted fears that Zimbabwe’s barely resuscitated economy is in for another bumpy ride.
Zim bankers fear indigenisation - survey
Zim bankers believe the call for indigenisation is a threat to the stability of a sector already on the cliff edge of an uncertain environment, a survey shows.
The rift between Reserve Bank of Zimbabwe governor Dr Gideon Gono and Empowerment Minister Saviour Kasukuwere over indigenisation deals is deepening.
Zimbabwe's central bank chief has warned the country's fragile economy could grind to a halt if the government rushes its planned seizure of majority stakes in foreign-owned banks.
Zim equity laws must benefit poor - Gono
Laws forcing foreign companies to sell majority stakes to black Zimbabweans should be used to benefit the country's poor and not just the rich elite, the country's central bank chief says.
Zimbabwean President Robert Mugabe's Zanu-PF party has denied reports that he is "fighting for his life" in a Singapore hospital, suggesting instead that he is "enjoying an Easter break with his family in Asia", a report says.
He might have PhD from a dubious institution - but you really can't help feeling a bit sorry for Zimbabwe's beleaguered bank chief John Mangudya.
Zimbabwean President Robert Mugabe, 90, has reportedly returned to Singapore in what his spokesperson says is a week-long private visit coupled with a "routine eye check-up".
Zimbabwean President Robert Mugabe is reportedly contemplating a Cabinet reshuffle that could see Finance Minister Patrick Chinamasa’s early exit from treasury.
The Reserve Bank of Zimbabwe has ruled out a speedy return to the local currency, and says the multi-currency regime will still be in use for some time.
Zimbabwe's fledging economy needs a decisive winner in the ongoing general elections, Reserve Bank governor Gideon Gono says, according to a report.
Gono: No plans to close StanChart in Zim
Zimbabwe's central bank has soothed fears after a threat to shut down Standard Chartered Bank and three mining firms until they comply with the law.
Gono orders hike in banks capital base
Zimbabwe's central bank has hiked 10-fold statutory capital requirements for merchant banks to $100m to restore confidence in the banking sector following last week’s collapse of a local bank.
Mugabe expected to 'save' foreign banks
Zimbabwe's Central Bank boss says he will consult with President Robert Mugabe on the latest moves to have foreign banks seized under the Zanu-PF led asset grab programme.
Concerns about who will succeed Zimbabwean President Robert Mugabe are intensifying as the veteran leader returned home from Singapore after a trip that fuelled rumours he was seriously ill.
'I am fit as a fiddle,' declares Mugabe
Zimbabwe’s president Robert Mugabe has scoffed at fears about his health, saying he is "fit as a fiddle" as he turns 88.